दोसरो बार्सिक नेपाल गौरब यात्रा – Nepal Pride Parade
दोसरो बार्सिक नेपाल गौरब यात्रा
queeryouthgroup	अपदेतहरु	 May 17, 2020 June 12, 2020 1 Minute
कोभिद-१९ को बिस्वमारिले बिस्वको ठूलो हिस्सालाइ नै घर भित्र बस्न बाध्य गरेको छ । सार्बजनिक भेला गर्न असम्भव भएको अवस्थामा, यस वर्स हामी गौरब यात्रा मनाउन लागेको छ । हो ! अनलाइन गौरब यात्रा ।
पैलाको बर्स हामिले हरेक साल जून मैनाको दोसरो सन्चरबारलाइ गौरब दिबस घोसना गरेको थियो । अन्तर-बरगिय र बिभिदता-पूर्न नेपालकै पैलो स्वतन्त्र र स्वायत्त गौरब यात्राको आयोजना थियो । यस बर्सको दोसरो बार्सिक नेपाल क्वयेर / सिमानक्रित यौन अभिमुखिकरन, लैङ्गिक पहिचान र यौन बिसेसताको मान्छेहरुको गौरब यात्रा (वा, छोतकरिमा नेपाल गौरब यात्रा) फेरी आफ्नै हिसाबले पैलो हुँदैछ ।
गौरब यात्रामा दुई प्रम्कुख कार्यक्रमहरू हुन ला’को छ :
१. तुइताथोन र इन्स्ताथोन
२. कार्यक्रम र सेसन
तुइताथोन र इन्स्ताथोन भन्दा अगारि “मेरो लागि गौरब भनेको के हो” भन्ने बिसेमा क्यै मान्छेहरुले बनाएको भिदियोहरु पोस्त हुन्छ ।
तुइताथोन र इन्स्ताथोन
ब्याःन ११ बजे देखि दिउँसो १ बजे सम्म तुइताथोन हुन्छ । सामाजिक सन्जालमा बिभिन्न बिसेहरुमा अन्तर-क्रिया गर्दै री-तुइत / सेर हुन्छ ।
तुइताथोन र इन्स्ताथोनको बेला तपाइँलाइ गौरब दिबस र क्वयेर हुनुको बारेमा बिभिन्न पोस्तहरु तुइतर र इन्स्तामा राख्न सक्छ । फोतो लिने, भनाइहरू लेख्ने, कबिता लेख्ने, आफुलाइ रिकर गर्ने, वा सायद गित गाउने, जे मन लाग्छ त्यै । आफुलाइ प्रस्तुत गर्ने, खुलेर एक्सपरेस गर्ने, नाच्ने, इत्यादि । गौरब झन्दाहरु छ ? आफ्नो घरबात हलाउने, राख्ने, फोतो लिने, पोस्त गर्ने । तपाइँको इछ्या अनुसार जति सजिलो गर्न चाहेपनि वा जति सिरजनसील हुन चायेपनि; गौरब दिबस सम्बन्धित आफ्नो सामाग्रि बनाउने ।
त्यो सामाग्रिहरु पोस्त गर्दा #NepalPrideParade र #NPP2020 हायस-तायग राख्न नभुल्नु ताकि हामि यो सम्बन्धि सबै पोस्तहरु री-तुइत, सेर र तेसमा अन्तर-क्रिया गर्न सक्छ । तेसै गरी तपाइँले इन्स्ताग्राममा @nepalprideparade र तुइतरमा @PrideParadeNp मेन्सन गर्न सक्छ ।
खुलेको छैन ? आफैले पोस्त गर्न अपथ्यारो लाग्छ ? हामिलाइ nepalprideparade@gmail.com मा तपाइँले बनाएको सामाग्रि ईमेल गर्नु । हामि तपाइँको पहिचान गोप्य राखेर पोस्त गर्छ ।
इन्द्रेनीको रङ्गमा तुइतर र इन्स्ताग्रामलाइ चमकाउँ ।
कार्यक्रम र सेसन
दिउँसो १:३० बजे देखि ब्यल्का ७ बजे सम्म अनलाइन सेसनहरु हुन्छ जुन पायेनल कुराकानि, मनोस्वास्थ्य कुराकानि, नेतर्वकिङ, इत्यादि हुन्छ ।
ब्यल्का १:३० बजे देखि २:४५ बजे सम्म मनोस्वास्थ्य अभ्यासकर्ता राजी मञ्जरी पोख्रेल र गैर-द्वयसांखिक अधिकारकर्मी दीप्सले “मनोस्वास्थ्य र हामी” बिसेमा वेबिनार संचालन गर्नलाछ ।
ब्यल्का ३ बजे देखि ४:३० बजे सम्म “क्वयेर आन्दोलनमा अन्तर्बर्गियता” बिसेमा वेबिनार हुनलाछ । बोल्नेमा लैङ्गिकता र जात व्यवस्था बारे लेखक गौरी नेपाली, अन्तर्लिङ्गी अधिकारकर्मी इशान रेग्मी र महिलावादी अभियानकर्ता शुभ कयास्थ हुन्छ ।
ब्यल्का ५ बजे देखि ७ बजे सम्म नेतवर्किङ कार्यक्रम हुनलाछ । क्वयेर युथ ग्रुप र क्वयेर राइट्स कलेक्टिभसँग भेटघाट गर्न आउनु ।
नेतवर्किङ कार्यक्रमको दोसरो भागमा “क्वयेर आर्त र फ्यासन” बारेमा यौता प्यानम हुनलाछ । त्यसमा मेक-अप आर्तिस् दर्शन र गैर-द्वयसांखिक अधिकारकर्मी दीप्स सँग प्रियाङ्करले सहजिकरन गरिराछ ।
यी सेसनहरूको ZOOM Link पाउनको लागि हाम्रो सामाजिक सन्जालमा मेसेज गर्नु ।
केहि एक्साइतिङ गर्न मन छ ? हामिलाइ इन्बक्स वा nepalprideparade@gmail.com मा सम्पर्क गर्नु ।
साबजनिक विग्यप्ती / बक्तब्य छित्तै हाम्रो वेबसाइतमा आउँछ र यैँ लिङ्क हुन्छ ।
फेसबुक इभेन्तकोको लिङ्क
Next Post Public Release 2020